ETshayina UkuFika okuTsha okungaNcamanganga Indebe yokuNgangeni manzi kwimilebe ye-Nude yegloss Umthengisi weLebhile yaBucala yeMatte Liquid Lipstick umzi-mveliso kunye nababoneleli | Iris Ubuhle
UkuFika okuTsha okungancamatheliyo indebe engangenwa ngamanzi kwimilebe ehamba ze Umthengisi weglosi yeMilomo yaBucala yeMatte Liquid Lipstick
Ukufika okutsha kwe-matte lipstick. I-Matte Liquid Lipstick ihlala ixesha elide kwaye ayinamanzi. I-lipstick ende kakhulu enxibe i-lipstick inezithako zokuthambisa ukuze uzive ukhululekile kunye ne-silky engomisi imilebe yakho ngaphandle.
I-matte liquid lipstick inombala ophezulu webala kwaye ibonisa i-matte velvet matte effect. Kwangaxeshanye, i-matte liquid lipstick iqulathe izithako ezinyakamisayo ukuzisa ukukhanya kunye nokuthungwa kwesilika ukwenza imilebe yakho iqaqambe kwaye ibe nomtsalane ngakumbi.
Iimpawu zale lipstick ayincangathi, ihlala ixesha elide, iVegan, ayinamanzi kunye ne-Kiss-proof.
I-Lipstick sisithambiso esibalulekileyo kubomi bakho bemihla ngemihla, esinokukhanyisa ithoni yesikhumba sakho. Le matte lipstick ifumaneka ngemibala emininzi, nganye efanelekileyo kwiitoni ezahlukeneyo zesikhumba kunye ne-makeup, unokuyisebenzisa ngokulula. Khetha enye ngoku kwaye udale ubuhle bakho bomntu.
Igama lento Matte Liquid Lipstick
4.Ixesha elide / lingangeni manzi
5.Iqulethe iiVithamini / ibhotolo yeShea
A: Okokuqala, sazise imfuneko yakho malunga nezinto, emva koko siya kunika ingcebiso ngokufanelekileyo kwaye sinikeze ikowuteshini. Nje ukuba zonke iinkcukacha ziqinisekisiwe zinokuthumela iisampuli. Iindleko zesampulu ziya kubuyiselwa ukuba iodolo yenziwe.
A: Emva kokuba uhlawule intlawulo yesampuli kwaye usithumele iifayile eziqinisekisiweyo, iisampuli ziya kuba zilungele ukuhanjiswa kwiintsuku ze-3-7. Iisampulu ziya kuthunyelwa kuwe nge-express kwaye zifike ngeentsuku ezi-3-7. Ungasebenzisa i-akhawunti yakho ye-express okanye usihlawule kwangaphambili ukuba awunayo i-akhawunti.
Silapha ukuze sikuncede—nceda uzive ukhululekile ukusithumelela i-imeyile ku-Sales01@amlsbeauty.com.
Ngaphambili: Factory Direct Sale Foundation Powder Customized Label yaBucala Matte Pressed Powder Foundation Makeup
Okulandelayo: Umzi-mveliso othengisa izinto ezithengiswayo wenze eyakho i-lipstick engangenwa manzi ixesha elide imilebe ye-matte liquid lipstick yabucala
i-lipstick yendalo ye-vegan yesiko
umthengisi weglosi yomlomo
ileyibhile yabucala ye-matte lipstick
ileyibhile yabucala ye-matte liquid lipstick
I-Lip liner yabucala ileyibhile inkohlakalo yasimahla yelog yesiko...
Umgangatho ophezulu makeup lipsticks 25 imibala OEM pri...
Ileyibhile ye-Matte liquid lipstick yabucala yenza i-o yakho ...
Ukufika okutsha kwe-cosmetic matte liquid lipstick iseti ...
iglosi yeglosi yomlomo weOEM isiko lelogo yakho...
Imilebe yesiko iglosi yabucala ileyibhile imenyezela imilebe yeglosi...